Cabashada # 1 ee Ku Saabsan Suuq Geynta | Martech Zone
Jimco, Janaayo 15, 2016 Jimco, Janaayo 15, 2016 Douglas Karr
Hal mar bil kasta ama wax la mid ah, waxaan ka maqalnaa cabasho isku mid ah rajooyinka kuwaas oo la shaqeynaya wakaaladaha suuq geynta iyo macaamiisha nagala shaqeynaya marketing inbound dadaalka. Ma aha in la xuso in cabashadani ay tahay mid aan aniga qudhaydu iska kaashan lahaa hay'addeenna haddii aanan fahmin sida suuq-geynta suuq-geynta ahi uu dhab ahaan u shaqeeyay.
Cabasho: Wax ganacsi ah kama helayno degelkeenna.
Dhibaato xoog leh ayaa ka jirta warshadaha suuq geynta sida loo sharaxo iyo sida suuq geynta loogu soo galo run ahaantii shaqeeya Fikradda ah sameynta websaydh waxay u rogi doontaa websaydhkaaga mashiin ay rajadu ka dambayso rajadu ay kugu heli doonto raadinta ama bulshada, akhri alaabtaada, isla markaaba buuxiso foomka websaydhkaaga ayaan ahayn xaqiiqda. Waa nooc ka mid ah sida ay u shaqeyso, laakiin inta badan ganacsiyada waligood ma maraan wadadan.
Aynu ka wada hadalno dhaqanka iibsiga, marka hore. Waxaan ka qornay daqiiqado yar yar iyo safarada macaamiisha kahor waxaanan kugu dhiiri galin lahaa inaad aqriso boostada. Xaqiiqdu waxay tahay in dadku kaa helin natiijooyinka raadinta, ku soo booqdaan boggaaga guriga, oo ay ku iibsadaan adeegyadaada fudeydkaas. Xaqiiqdii, xogta ay bixiso Cisco waxay muujineysaa in celceliska ganacsigu leeyahay in ka badan 800 oo safarro kala duwan (fadlan akhri buugga ebook ee aan ku qornay tan).
Haddii aad tahay shirkad adeeg (sida wakaaladeena), waa kuwan sida safarka wax iibsigu badanaa u shaqeeyo:
Ereyga Afka - macmiilku inta badan wuxuu noo sheegaa saaxiibkood markay raadinayaan caawimaad aan bixinno.
Search - rajadu waxay ka raadineysaa internetka meheraddaada waxayna heleysaa boggaaga iyo bulshada.
website - rajadaasi waxay soo booqataa degelkeenna. Waxay eegayaan khibradda aan leenahay, ilaha ka caawin kara inay go'aan gaaraan, kooxda ay la shaqeyn doonaan, iyo aqoonsiyada ama macaamiisha aan horeyba ugu shaqeynay.
Content - rajadu waxay akhrinaysaa waxyaabaha aad ka kooban tahay oo xitaa waad soo dejisan kartaa ama codsan kartaa macluumaad dheeraad ah.
Raac - rajadaasi waxay mararka qaar nala xiriirtaa bulsho ahaan, waxay aragtaa nooca shaqada aan qabanayno, waxay weydiineysaa dadka shabakadeena sida aan ula shaqeyn karno iyo inaan la tacaali karno dhibkooda ama inkale.
Rukumo - Marar badan rajadu kuma jirto boos ay wax ku iibsadaan, laakiin waxay samaynayaan cilmi-baaris sidaas darteedna waxay ugu biirayaan joornaalkaaga si ay ula xiriiraan oo ay ugu quudiyaan talo qiimo leh.
kulan - rajadaas ayaa nagu xirmi doonta iyada oo loo marayo Ereyga Afka xiriir si aad u hesho isbarasho shaqsiyeed Ka dib kulanka, waxay go'aamiyaan inay na aaminaan iyo in kale waxaanan bilaabaynaa ganacsi.
Ama Xiriir - mararka qaarkood rajadu waxay si toos ah noogula soo xiriiri kartaa emayl ama taleefan si ay noogu sameysato kulanka.
Marka la eego hawshaas, miyaad aragtaa meesha marketing inbound ku habboon yahay iyo maxay dhab ahaan u siineyso ganacsigaaga? Taasi waa wax aad uga duwan tan waxa suuq-geynta suuq-geynta badanaa ay wadaagaan, oo ah:
Search - mawduuc oo ka hel boggaaga inuu ku jiro darajo.
Download - diiwaangeli oo soo dejiso dammaanad.
Close - hel talo soo jeedin iyo saxiix.
Suuq-geynta Inbound ROI
Marka la eego habdhaqankan kala duwan, miyaad arki kartaa sida ay u adagtahay in loo nisbeeyo suuqgeyntaada soo galaya guud ahaan iibkaaga iyo istaraatiijiyadaha suuqgeynta? Haddii aad leedahay koox wax iibisa oo dibadda ah, iib ahaan iib kasta waxaa loo aaneeyaa kooxdaas - gaar ahaan haddii ay khibrad leeyihiin oo ay horayba u kobcinayeen xiriirro rajooyin aad jeceshahay inaad ganacsi la yeelatid.
Su'aalaha suuq geynta loo baahan yahay waxaa ka mid ah:
Markaad xiratid rajo, miyay sameeyeen booqo bartaada habka iibinta?
Markaad xiratid rajo, miyay sameeyeen iska qor joornaal?
Markaad xiratid rajo, miyay sameeyeen soo dejiso ama iska qor wixii ku saabsan?
Markaad xiratid rajo, miyay sameeyeen search adiga khadka tooska ah?
Maaha inaad u nisbayn kartid iibka oo dhan booqashadooda suuq geynta, laakiin u maleyn maayo inaysan saameyn ku yeelan wareegga iibku waa qalad nasiib darro ah. Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada mid ka mid ah macaamiisheena oo la yaaban:
Istaatistikadaani waxay kala shaandheysaa wax kasta oo bot ama bot ghost bot trafik ah waxayna bixiyaan sawir ka badan sanad ka badan boggooda Analytics. Sannadkii hore wuxuu lahaa degel gaabis ah oo runtii lahaa waxyaabo ka jabay… nasiib darro shirkadda tikniyoolajiyadda. Waxaa laga helay 11 natiijooyin raadis ah oo ka baxsan magac shirkadooda, 8 ka mid ah bogga 2. Xitaa magacooda shirkadeed ayaa lagu dhex daray qaar la mid ah shirkado la magacaabay. Hadda waxay xukumaan bogga natiijada mashiinka raadinta.
Hada Google waxay leedahay muuqaal shirkadeed oo buuxa oo la soo bandhigay, astaamahooda bulsheed ayaa la soo bandhigayaa, iyo sharaxaad shirkadeed oo dheeri ah oo leh sublinks bogga natiijada mashiinka raadinta. Waxay u kala sareeyaan 406 eray-bixinno kala duwan, 21 bogga 1, 38 ee bogga 2 iyo intiisa kale oo sii wadaya inay kasbadaan sidii ay awood ugu dhisi lahaayeen baaritaanka dabiiciga ah.
Suuq geynta ma ahan qaab gacmo-furan oo ganacsi.
Shaqaalahaagu ma ku dhiirrigelinayaan waxyaabahaaga internetka?
Ma codsaneysaa kaalmada xiriirka bulshada si aad ugu dhiirrigeliso xeeladaha khadka tooska ah?
Ma waxaad ku bixinaysaa kor u qaadista waxyaabaha ku jira qadka internetka?
Kooxdaada iibintu ma u adeegsaneysaa waxyaabaha ku jira inay ka caawiso xiritaanka rajadooda?
Kooxdaada iibintu ma bixinaysaa jawaab celin ku saabsan waxyaabaha ka caawin kara ama waxyaabaha aan caawinayn?
Waxaan u maleynayaa in shirkaduhu ay yihiin geedo marka ay heystaan ​​daraasiin shaqaale ah mana jiro qof kor u qaadaya waxyaabaha ay shirkaddu maalgashatay. U doodiddu waa mid muhiim ah markaad sii kordheyso gaadhistaada. Haddii aan arko saaxiibkay ama saaxiibkay oo kor u qaadaya ganacsigooda oo aan ku jiro marxaladda go'aanka, gabi ahaanba waxaan doonayaa inaan hubiyo waxa ay bixiyaan.
Suuqgeynta Inbound maahan ikhtiyaar dambe. Waxaan dhawaan booqannay rajo aan xayeysiin u sameynay degel la'aan 15 sano oo khadka tooska ah ah waxayna ii sheegeen in sanad walba kharashka macdanta halkii marba kor u kacdo oo heerka ay ku dhow yihiin uu hoos u sii dhacayo. Dadku way ka warwareegayaan inay ganacsi la sameeyaan maxaa yeelay ma haystaan ​​degel websaydh ah. Hadda waxay na weydiinayaan sida ay u awoodaan isqurxin sanadahaas lumay ee aysan maal gashan. Waxay yiraahdeen inay garaacayaan tartamayaasha leh bogag waaweyn, oo xukuma natiijooyinka raadinta, kuna howlan baraha bulshada.
Jawaab gaaban: Ma tartami karaan hadda.
Laakiin waxay maalgashi ku sameyn karaan suuq geynta hadda soo geleysa taas oo abuuri doonta dardar, ha u ogolaato inay hadda ku xidho iibsiyo badan waxyaalo awood leh, oo ay sii wadaan feejignaanta iyo ka warqabka astaanta ay ku leeyihiin internetka. Xaqiiqdii, raadadka macmacaanka ah ayaa soo mari doona marka hore, laakiin waqti ka dib waxay xiri doonaan raadad badan, waxay qaadan doonaan waqti yar, waxayna keydin doonaan tan lacag ah.
Mar dambe dood ma aha haddii iyo in kale marketing inbound shaqeeya Shirkad kasta oo weyn waxay maal-gashaneysaa inbadan oo ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay, raadinta iyo istaraatiijiyadaha bulshada iyagoo sii wadaya inay arkaan soo-celinta maalgashiga. Doodda ayaa ah sida aad u tiro koobto oo aad u nisbeyso soo noqoshada maalgashigaas.
Hadaad maal gashatay marketing inbound oo aad aragto dardaaran liidata ama horseedyo tayo liidata, miyaad dhag u dhigaysaa macluumaad kale
Imisa rajo ayaa jirta booqashada goobtaada tan iyo markii aad hirgelinaysay istaraatiijiyadaada suuq-geynta gudaha?
Imisa rajo u saxiixay joornaalkaaga tan iyo markii aad hirgelinaysay istaraatiijiyadaada suuq-geynta gudaha?
Imisa rajo soo dejiyey ama diiwaangeliyey nuxur ahaan tan iyo markii la hirgaliyay istiraatiijiyaddaada suuq-geynta gudaha?
Imisa rajo baaray adiga khadka tooska ah adiga tan iyo markii aad hirgalinaysay istaraatiijiyadaada suuq-geynta gudaha?
Intee leegtahay tiradaadu iibinta ayaa xirmaysa tan iyo markii aad hirgelinaysay istaraatiijiyadaada suuq-geynta gudaha?
Intee in leeg tahay adiga wareegga iibka tan iyo markii aad hirgelinaysay istaraatiijiyadaada suuq-geynta gudaha?
Suuqgeynta gudaha ayaa saameyn muuqata ku leh guud ahaan iibka iyo suuqgeynta shirkad kasta oo ka mid ah warshadaha. Laakiin kuma shaqeyneyso meel bannaan, waxay ka shaqeysaa barbar-socodkaaga iyo xeeladaha kale ee iibka iyo suuqgeynta. Si loo kordhiyo ROI, waa inaad noqotaa mid u heellan oo ka shaqeynaya sidii loo hubin lahaa inaad dhiseyso xawaare iyo awood aad ku sameyso warshadahaaga. Kordhinta aqrintaada, kobcinta shabakadaada, kobcinta iyo inaad lawadaagto bulshadaada soo socota… waxaas oo dhan waxay qaadataa waqti iyo dadaal aan caadi aheyn.
Ma iibiyo barnaamij aanan rumaysanayn. Waxaan iibinayaa nidaam kor u qaaday gaadhitaankayaga iyo dakhligayaga hay'addayada 7 sano oo toos ah. Waxaanan sidoo kale u qabannay daraasiin shirkado suuqgeyn iyo tikniyoolajiyad ah. Kuwa qiimeeya qiimaha iyo dadaalka muddada-dheer gabi ahaanba aqoonsan natiijooyinka.
Warshadeena (oo ay kujirto wakaaladeena) waxay ubaahantahay inay qabato shaqo wanaagsan oo ah waxbarida macaamiisha iyo bixinta dhamaan tirakoobyada bixiya in maalgashiga soo galaya uu yahay maalgashiga ugu fiican ee macaamilku ku sameyn karo dadaalkooda suuq geynta.
Tags: soo galidsoo gelitaanka gudahamarketing inboundraadad